Lihlehlisiwe elabasolwa ngokubulala umlingisi | isiZulu
IZITHOMBE: Isiqephu sokugcina sikaDumi Masilela kuRhythm City
Asenkantolo amadoda asolwa kwelokubulawa komlingisi
Johannesburg – Abesilisa abathathu abasolwa ngokubandakanyeka ekubulaweni kwesihlabani seRhythm City, uDumi Masilela, bavele kafuphi eNkantolo kaMantshi eBenoni ngoLwesithathu.
Laba bebengaqali ukuvela enkantolo njengoba bavela nangomhlaka-8 Septhemba, nokuyilapho inkantolo yatshelwa khona ukuthi amanyela eminwe oyedwa wababoshiwe akhomba ukuthi "wayekhona endaweni yesigameko".
Inkantolo icala ilihlehlisele uNovemba 28 ukuze UMqondisi wezokuShushiswa koMphakathi ezothatha isinqumo ngamacala okumele kuqhutshekwe nawo nangokuthi ngabe leli cala kumele lilalelwe eBenoni noma eNkantolo eNkulu eGoli yini.
OLUNYE UDABA: Uzofaka isicelo sebheyili unogada ngezinsolo zokunukubeza abafundi
UMfundo Nkosi, uBongani Masumbuka noSolly Mukhuba, babhekene necala lokubulala, ukuduna imoto, nokuzama ukuduna imoto, kanye nokutholakala nesibhamu esingekho emthethweni.
Bonke bagcinwe esitokisini.
UMasilela washonela esibhedlela ngomhlaka-3 Agasti, ngemuva kokudutshulwa bezama ukuthatha imoto yakhe eTembisa.